Namuhla, i-laser rangefinder ayiseyona indawo yokunethezeka, njengoba yayingama-5-7 eminyakeni edlule, kodwa isidingo. Ngaphandle kwe-roulette enjalo kunzima hhayi kuphela ekwakhiweni kochwepheshe, kodwa futhi nokulungisa okujwayelekile. Ngaphezu kwalokho, namuhla abatholi bezinhlelo basebenzisa abenzi be-realtors, abaklami kanye nabamele abasebenzela umphakathi. Manje imakethe inenani elikhulu lama-roulettes, ngokuvamile ububanzi bokulinganisa abudluli ngamamitha angu-50, kodwa uma uludinga, ungathola amathuluzi angu-70 ngisho namamitha ayi-100.
Ngabe yiziphi izinto ezihamba phambili kanye nendlela yokuzisebenzisa?
I-finder yebala uyingcingo ekhethekile, ngokuvamile i-ultrasonic, i-electronic noma i-optical, esetshenziselwa ukuzimisela okungaxhunyiwe okungaxhunywanga kubanga kuya entweni. Umphumela uvela esibukweni ngokushesha. Isimiso sokusebenza ukuthi idivayisi idlulisa impulse, ebonakala ebusweni futhi ithathwa ngumamukeli okhethekile. Isibonelo, abatholi bebanga lesigaba basebenza ngesimiso sesignali yesigaba esibonisiwe nesamukelwe. Ukwenziwa kolwazi kwenziwa ngamamitha, amadidi noma izinyawo. Ngaphezu kwalokho, idivayisi enjalo ingaba nezinga laser. Umtholi wezinhlobo zalolu hlobo uzodla okungaphezulu, kodwa ukusebenza kwayo kuphakeme. Ungakwazi ukukala izindawo eziqondile, eziqondile nezinthambekele, nakwezindawo ezinzima ukufinyelela. Kulesi simo, akudingeki ube khona eduze kwento. Ububanzi bokusetshenziswa kwabo bukhulu kakhulu, kusukela ekwakhiweni kuya kwi-geodesy ne-cartography.
I-range finder laser: ukubuyekezwa kwabathengi
Umuntu akakwazi ukungazinaki isici esibalulekile njengezimpendulo ezishiywe ngabathengi. Kuze kube manje, ama-rangefinders athandwa kakhulu, ngakho athengwa ngabaningi. Kodwa izibuyekezo zisekelwe ngokuyinhloko kulokho umkhiqizi okhethwe khona. Ngakho, ama-counterfeits ase-Chinese awawuthandwa kakhulu futhi awusizo. Njengoba ochwepheshe babhala, ukunemba kwemikhiqizo enjalo akukhuthazi. Izindlela ezinhle kakhulu zokukhiqiza kwe-Chinese azifanelekile ukulungiswa okuncane ekhaya. Abathengi bathi amamodeli aseYurophu angcono kakhulu, nakuba ayabiza kakhulu. Inombolo enkulu kunazo zonke izibuyekezo eziqondile zivela enkampanini yaseJalimane uBoch, engumholi ekukhiqizeni amathuluzi wokwakha eYurophu nasemhlabeni. Kunoma yikuphi, kungcono ukuthenga i-laser rangef expensive, ukubuyekezwa mayelana nokuthi yikuphi okuhle. Isibonelo, isivinini kanye nokunemba kwezilinganiselo kudlala indima ebalulekile.
Yini okufanele ukukhetha isekelwe?
Lapha kunemigomo eminingi, ucabangele okumele ukwenze lokhu noma lokho okuthengwayo. Okokuqala udinga ukunquma, udinga i-roulette yomsebenzi noma yomkhaya. Uma uthenga i-rangefinder yokwenza ukulungiswa ekhaya, khona-ke kuyokwanela ukuba kube isilinganiso semali yesimodeli somndeni. Uma usebenza ngokucophelela ekulungiseni, kunengqondo ukuthenga i-roulette yama-multifunctional. Esikhathini esilandelayo, ukuthengwa kuzodala kakhulu, kufanele kukhunjulwe.
Omunye umgomo obalulekile ububanzi bezilinganiso. Amamodeli asebenzayo angasebenza kude kumamitha angaba ngu-200, kodwa ngokuvamile akuvamile ukuthenga idivayisi enjalo. Ezimweni eziningi, uhla oluncane lwamamitha angu-30-50 lwanele. Ungayinaki i-saturation esebenzayo yedivayisi, isibonelo, ikhono lokubala indawo, ukukhumbula ulwazi olutholiwe (inkumbulo esakhelwe), izinga, njll Yebo, asikwazi ukusho ngomkhiqizi, ngoba lokhu kungenye yezikhathi ezibaluleke kakhulu.
Iqoqo elincane elidingekayo lemisebenzi nokuphepha kwedivayisi
Kubalulekile ukunaka ukuthi i-rangefinders yanamuhla inekhono lokubala ibanga kuphela. Isibonelo, izindlela ezilula zomndeni zenkampani ethi "Bosch" zinemisebenzi yokubala indawo, ukuhlanganisa nokukhipha, njll. Kuyinto efiselekayo ukuthi idivayisi inexhumano kwimemori khadi, okudingekayo ukuba ikhanda ngemiphumela ngekhanda. Ngokuyinhloko, uhla lwemisebenzi yabatholi bezintlu zasendlini cishe cishe, yingakho la ma-roulettes ashibhe eshibhile. Amamodeli asebenzayo afakwe i-timer, i-bluetooth eyakhiwe (ukuze kungenzeka ukudluliselwa kwedatha kumakhompyutha). Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuhlehla zibe izingxenye futhi usebenzise inclinometer. Kungashiwo ngokuqiniseka ukuthi ngamacala angu-90% umshini wendlu uwanele. Isibonelo, i-Bosch laser rangefinder, okuzobuyekezwa kuyo ngezansi, idume ngomzimba wayo ovikelwe kahle ngokumelene nomswakama nobuthuli. Lokhu kubaluleke kakhulu uma usebenza ezintweni ezinothuli, ezimweni ezinzima zezulu, njll.
I-range searcher laser Bosch: izinzuzo kanye nokubuyekezwa kwabathengi
Njengoba kuphawuliwe ngenhla, imikhiqizo yaseJalimane eyenziwe yile nkampani idume ngekhwalithi yabo ephakeme yomhlangano. Akukho okunye kanye nama-roulettes avela kwenkampani "Bosch". Ake sicabangele isibonelo se-PLR 25 esingama-ruble ayizinkulungwane ezingu-6. I-Roulette yasekhaya enezinhlobo zamamitha angu-25 nokuphambana kwamamitha amabili. Idivayisi izobala ivolumu, indawo, futhi igcine imiphumela. Kuyaphawuleka ukuthi ngesisindo samagremu angu-180 kuphela, i- "Bosch" i-PLR 25 inezici eziningi ezitholakala ezinhlobonhlobo zobuchwepheshe be-rangefinder. Isikhathi sokulinganisa sesukela kumasekhondi angu-0.5 kuya kwangu-4, kuye ngokuthi indawo yokusebenza. Ukukhanya okungcono nokuthuli okungaphansi, ngokushesha uzothola imiphumela. Kumele kuqashelwe ukuthi kukhona imodi yokugcina amandla, okuhlanganisa ukuvala idivayisi emva kwemizuzu embalwa yokungasebenzi. Ngokuyinhloko, isisombululo se-laser range Bosch PLR 25 yisinqumo esihle kunazo zonke hhayi nje kuphela kubadlali abathandayo, kodwa futhi nabaqeqeshi ngentengo enengqondo. Ngokuqondene nomthengi impendulo kulo modeli, konke kulungile. Lokhu kungenxa nje kuphela ngentengo engabizi ngenani elikhulu lemisebenzi, kodwa futhi nekhwalithi ephezulu yendikimba.
Ukubuyekezwa kweLeica Disto D2
I-laser rangefinder kusuka kulo mkhiqizi inezinkanyezi ezingu-5 kubathengi. Ithuluzi lisetshenziselwa izinhloso zobuchwepheshe, ngakho-ke lizobiza okungenani ama-ruble angu-12 000. I-roulette iyinkimbinkimbi kakhulu futhi inesisindo esingu-160 amagremu kuphela. Kuyaphawuleka ukuthi lo modeli unembile kakhulu. Ukuphambuka akudluli ngamamitha ayi-1.5. Ngokusho isitifiketi somkhiqizo, ububanzi bungaba ngamamitha angu-60, kodwa abasebenzisi kule akhawunti banombono ohlukile. Ngakho-ke, abantu abaningi bathi ekamelweni elimnyama ungakwazi ukukala kude namamitha angu-30, futhi ekukhanyeni nakancane. Ukukhokhela lokhu okungalungile, abaningi batusa ukuthenga umbukiso. Sicela uqaphele ukuthi i-Disto iyi-rangefinder ye-laser necala elivikelwe kanye nokusebenza okukhulu. Lapha uyengeza, ususe, unqume ivolumu, indawo, izibonakaliso zomsindo kubantu abanamehlo ampofu nokuningi okuningi. Isixazululo esihle sokusetshenziswa kochwepheshe, empilweni yansuku zonke ungathenga into elula.
Izinzuzo zama-laser roulettes
Sitshele kakade ukuthi kulula kakhulu, okusheshayo, njll. Kodwa kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi umtholi wezintaba usezikhathi eziningi isidingo. Isibonelo, uma ungenalo ithuba lokusebenza nomlingani ongasiza ekuthwaleni i-roulette kusuka ekhoneni elilodwa lekamelo ukuya kwenye, khona-ke umsizi wakho oyinhloko uzoba ngesilinganiso se-laser tape. Uzokwenza izilinganiso ngaphandle kokuhlala eduze kwento oyifunayo. Ngalokhu engqondweni, ungasho ukuthi yedwa ongakwazi ukukala kalula ukuthi awukwazi yini ukuthola izandla noma ngisho nasezinyathelo. Ngaphezu kwalokho, isivinini kanye nokunemba kwalolu roulette kuncane kakhulu kunokwesintu. Omunye umbuzo yikuphi okungcono kwe-laser rangefinders. I-Laser roulettes evela kubakhiqizi abaningi baseYurophu inelungelo lokunakwa. Njengoba ubona, iBossch yenza izinsimbi zomculo ezinhle kakhulu, kodwa kunezinye eziningi. Ake sibheke ezimbalwa zazo.
Okuphakeme okuncane ungabona ukuhlola okuncane okuncane okuthola abadlali abathandwayo. Yilaba abakhiqizi ababili (uLeica noBoss) ababhekwa njengabaholi emhlabeni wonke. Kodwa-ke, zonke izinkampani ezifanayo ziqondiswa ukwenziwa kwethuluzi lobuchwepheshe, ngakho awukwazi njalo ukukhetha uhlelo lokusebenza lwekhaya. Nakuba "Bosch" ikhiqiza umugqa othakazelisayo wezinto ezingabizi kakhulu zokusetshenziswa ekhaya. Noma kunjalo, akuwona wonke umuntu onemali eyanele yokuthenga imikhiqizo evela kulaba abakhiqizi. Isibonelo, ochwepheshe bavame ukuthenga ama-rangefinders "i-Hilti", okubhekwa njengeyodwa enembile kakhulu. Amanani amamodeli angcono kakhulu avela kuma-ruble ayizinkulungwane ezingu-8, futhi uma imodeli yasendlini, khona-ke uzothola okwanele ukuthenga izinkulungwane ezingu-5. Kodwa ukwahlulela ngempendulo yomthengi, ukulungiswa kwendlu okungcono kakhulu yiwona amadivayisi "we-Skil". Le roulette yileveli yelasi, isiphequluli sokulinganisa kanye nokukwazi ukubala indawo kumkhiqizo owodwa. Kukawe.
Indlela yokwenza okulungile?
Uma uthenga umtholi webala laser, imfundo kufanele ibe ngesiRashiya. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi emakethe awaziwayo. Uma lokhu kuyikhokho yamaShayina, khona-ke inkulumo mayelana nesiqinisekiso kanye nanoma yiziphi iziyalezo azikwazi ukuhamba. Izinkampani ezidume kakhulu zinikeza isiqinisekiso iminyaka eminingana ku-rangefinders yazo. Njalo qaphela indlela izindlu ezivikelwe ngayo emswakeni nasothuli. Uma usebenza emvula noma eqhweni, lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi. Uma uthenga ukusetshenziselwa ekhaya, ungaboni kuqala ububanzi bokulinganisa. Ezimweni eziningi, amamitha angu-20-40 akwanele, kodwa ukutholakala kwemisebenzi eyengeziwe kubalulekile. Akuyona into engafanele ukuba nezinga ongaluqondisa ngayo izindawo eziphakemeyo. Ngaphezu kwalokho, ukuba khona kombukiso kubalulekile. Kodwa ukukhumbula imiphumela kumacala amaningi akudingeki. Akukho okukuvimbela ekuthwaleni incwadi yezincwadi kanye nepeni bese uthatha amanothi, ikakhulukazi njengoba iningi lethu lisetshenziselwa lokho, futhi kulula kakhulu.
Kuwusizo ukwazi wonke umuntu
Kunemithetho eminingana ewusizo ukuthi noma ubani osebenza ne-finder yebanga kufanele azi. Okokuqala, ungaqondisi i-laser beam ngaphezu kwamehlo akho, ngoba angabangela ukushisa kwe-retinal, ikakhulukazi uma evezwa isikhathi esithile. Okwesibili, zama njalo ukufaka idivayisi endaweni eqinile, mhlawumbe ku-tripod ekhethekile, ngakho ukwandisa ukunemba kwezilinganiso. Khumbula njalo ukuthi ilanga eliqondile eliwela phezu kwesibhamu se-laser singenza singabonakali emehlweni esintu. Nakuba lokhu kungathinti ukunemba kwezilinganiso, awukwazi ukubona ukuthi isilayeli iqondiswe kuphi.
Ngakho sazibuza umbuzo wezigaba ze-rangefinders. Njengoba ubona, idivayisi iyasiza futhi iyadingeka. Lokhu kuthenga ngeke kube okungaphezulu. Ngaphezu kwalokho, asikho isidingo sokuthenga amamodeli abizayo. Kuhlale kunengqondo ukuhlala ngento ethile. Lokhu kungenxa yezobuchwepheshe ukuthi i-laser rangefinder Robot 40, ekwazi ukuhlinzeka ngokulingana okuphezulu nokulinganisa (amamitha angu-40). Kubalandeli, i-roulette engabizi yenkampani "Skil" noma "Bosch" iyafaneleka. Into eyinhloko njalo ukuthenga ngokuzithandela, okungafanele uzisole ngakho.
Ufuna ukwazi ukuthi ungabeka kanjani ibhodi leparkquet? Sizokufundisa
Ingabe ingilazi faceted uphawu eRussia?